Le yindlela i-WhatsApp yoShishino eya kusebenza ngayo, esele iqale iimvavanyo zayo zokuqala eSpain | Iindaba zeGajethi
IiVillamandos | | Izaziso, WhatsApp
I-WhatsApp iyaqhubeka nokusebenza ngokuzimisela kwikamva layo, kwaye ukongeza kwiindaba kunye neempawu ezintsha ezithi ziqalise ngamathuba athile, sele kubonakala ngathi kuqinisekisiwe oko Baqalisile ukusebenza kwishishini leWhatsApp kwaye sele iqalile ukwenza njalo kwilizwe lethu. Olu hlobo lutsha lwesicelo luya kujolisa kwiinkampani ezinokuthi zibe nobudlelwane obusondeleyo kunye nabathengi bazo.
Ukuvuza okuninzi, okuvela kwezinye iinkampani ezivavanya i-WhatsApp yeShishini, kusivumele ukuba sazi imiba yesicelo esitsha kunye neenkcukacha zendlela ezakusebenza ngayo. Ewe kunjalo, asilazi ixabiso eliza kubakho kule WhatsApp kwiinkampani ezinkulu.
1 Siza kubona ntoni njengabasebenzisi beShishini kuWhatsApp?
2 Kwaye yintoni enokuyenza inkampani?
Siza kubona ntoni njengabasebenzisi beShishini kuWhatsApp?
Enye yezona zinto zixhalabisayo kwinani elikhulu labasebenzisi be-WhatsApp kukuba siya kuzifumana xa singena kwenye yezi profayile, kunye nokuba yeyiphi indawo oya kuthi unxibelelane nathi. Ngokumalunga neyesibini, akukho lwazi lukhulu ngalo mzuzu, ke kuya kufuneka silungiselele ukufumana izinto ezithile malunga neyokuqala.
Kuxhomekeka kwinkampani, siya kuba nezinto ezithile zokusebenza okanye ezinye. Ezinye iinkampani ziya kuyisebenzisa njengoko ubona kwividiyo esikubonisa yona ngezantsi, okanye njengejelo lenkonzo yabathengi ukucacisa ukungathandabuzeki komsebenzisi okanye ukuphendula izicelo ezahlukeneyo, into esele yenziwe rhoqo ziinkampani ezithile.
Into ebonakala icacile kukuba akuyi kubakho luhlobo lunye lweakhawunti yeWhatsApp yeShishini, kodwa kunokubakho ukuya kuthi ga kwisine;
Iakhawunti yeshishini: iya kuba yiakhawunti eqhelekileyo eya kuthuthela kwiprofayili yeshishini
I-akhawunti yeshishini eqinisekisiweyo: iya kuba yiakhawunti efuduselwe kwiprofayile yeshishini, eya kuthi iqinisekiswe kwaye ikwazi ukusebenzisa usetyenziso lweselfowuni kwiinkampani.
Iakhawunti yeshishini ngebheji ethathe umhlala-phantsi: iya kuba ziiakhawunti ezazikhe zaqinisekiswa, kodwa ngenxa yokuxhatshazwa okanye ukuthumela ugaxekile, kuyekile ukuqinisekiswa. Sicinga ukuba akukho nkampani naphi na emhlabeni eya kufuna ukuba nolu hlobo lweakhawunti
Ishishini kwiakhawunti esemgangathweni: ukuba inkampani ifuna ukuyeka ukuba neakhawunti yeshishini, iya kuba neakhawunti yolu hlobo
Kwaye yintoni enokuyenza inkampani?
Okokuqala, kufuneka sazi ukuba iinkampani ziya kuba nesicelo esithile, ubuncinci okwangoku esiza kufumaneka kuphela kwizixhobo ezinenkqubo yokusebenza ye-Android. Ungabona ezinye zeenketho eziza kubakho iinkampani kumfanekiso esikubonisa wona ngezantsi;
Ezinye ze Iimpawu ezithile zeShishini likaWhatsApp izakuba zezi zilandelayo;
Ukubakho kokuthumela imiyalezo ngokuzenzekelayo, ukwazi nokuseka iiyure zokuvula
Icandelo le "Statistics" apho ungabona khona imiyalezo ethunyelweyo kunye neyamkelweyo
Inkxaso yamacwecwe njengokuba sonke sisazi ngoku ayifumaneki kuhlobo oluqhelekileyo
Ukubakho kweakhawunti ngaxeshanye njengenkampani yabucala okanye inkampani, okanye ukufudukela ngokusisigxina kwiakhawunti yabucala iye kwinkampani
Ukongeza inombolo yasendlini kuWhatsApp akusayi kuba yinto efanelekileyo kwiinkampani zeWhatsApp zeShishini
Ngelo xesha akukho umhla usemthethweni wenkulumbuso yeWhatsApp yeShishini, nangona okucacileyo kukuba ukubheja kukaFacebook, umnini wesicelo sokuthumela imiyalezo kwangoko, kubonakala ngathi kuya kujolisa kwilizwe lezoshishino. Kwaye ngaba i-WhatsApp yabantu singatsho ukuba sele icinezelwe kumda kunye nomda weentshukumo kwaye ngakumbi izibonelelo zincitshisiwe kakhulu.
Ngaba ucinga ukuba isicelo esitsha soShishino kuWhatsApp siza kuphumelela kokubini kwishishini naphakathi kwabantu?. Sitshele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngenye yeenethiwekhi zentlalo apho sikhona, kwaye sinomdla wokwazi izimvo zakho kunye neenkxalabo zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Yiyo le nto i-WhatsApp yoShishino eya kusebenza ngayo, esele iqale iimvavanyo zayo zokuqala eSpain
IAmazon isungula 'i-dongle' ukuze ikwazi ukulayisha kunye nokumamela umculo kwi-iPhone ngaxeshanye